आमाको निधनपछि छोरीलाई २ लाख सहयोग
काठमाडौं, १२ चैत । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा रहेका ताप्लेजुङ थेचम्बुका युवाहरूले एक मृगौलारोगीको उपचारार्थ संकलन गरेको रकम पीडितको मृत्यु भएपछि छोरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ताप्लेजुङ थेचम्बु युवा एकता सेवा समाज मलेसियाले पठाएको २ लाख रुपैयाँ शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङले मृतक २९ वर्षीया सुमिरा लिम्बूकी छोरी अढाई वर्षीया मुमिन लिम्बूलाई हस्तान्तरण गरे । थेचम्बु माइती भई झापामा बिहे गरेकी… विस्तृत समाचार
राष्ट्रपति भण्डारी भारत जाँदै
काठमाडौं, १२ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्केको एक सातापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अर्को छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा जाने भएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी वैशाख ४ गते भारत भ्रमणमा जाने तिथि तय भएको छ । उनले वैशाख ५ मा नयाँदिल्लीमा उच्चस्तरको भेटवार्ता गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । उनको भ्रमण तालिका केही दिनमा सार्वजनिक हुनेछ । यसअघि चैतको दोस्रो साता… विस्तृत समाचार
मुलुक कसको भरमा ?
काठमाडौं, १२ चैत । देश कसले चलाइरहेको छ ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कसैलाई पनि कार्यवाहक नदिई चीन भ्रमणमा निस्केपछि अहिले यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारको दैनिक कामकारबाही सञ्चालनार्थ मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक दिने परम्परा थियो । तर योपल्ट प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि कार्यवाहक नतोकी विदेश गए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई विशेष सुरक्षा एस्कर्टिङसहितको सुविधा दिइन्छ ।… विस्तृत समाचार
स्वर्गद्धारी दुर्घटनाः घरै रित्तियो
ललितपुर, १२ चैत । तिखिदेवल मन्दिर छेवैको पाँचतले घरवरिपरि शुक्रबार मान्छेको बाक्लो उपस्थिति थियो । त्यहाँ आएका सबै मानिसको अनुहार निन्याउरो थियो । रुवाबासी चलिरहेको थियो । केही परको अर्को घरको अवस्था पनि यस्तै थियो । तिखिदेवल मन्दिरनजिकैको उक्त घरमा बस्थ्यो दिनेश बस्नेतको चार जनाको सुखी परिवार । तर प्युठानमा शुक्रबार भएको स्कोर्पियो जिप दुर्घटनामा दिनेशको परिवारैले ज्यान गुमाएपछि दिनभर तिखिदेवल नै स्तब्ध बन्यो ।… विस्तृत समाचार
​कञ्चनजङ्घामा सिकार गर्न अनुमति दिने तयारी
काठमाडौँ, १२ चैत । स्थानीय बासिन्दाले संरक्षण गरिरहेको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा सरकारले व्यावसायिक सिकारको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । संरक्षणमा संलग्न कञ्चनजङ्घा क्षेत्रका बासिन्दाले नाउरको सङ्ख्या अपेक्षाभन्दा धेरै वृद्धि भएको बताउँदै व्यावसायिक सिकारका लागि अनुमति दिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले त्यसबाट हुने आम्दानी संरक्षणका थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिनसमेत माग गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ । कञ्चनजङ्जा संरक्षण क्षेत्र… विस्तृत समाचार
​सेटिङका कन्टेनर केरुङमा अलपत्र
काठमाडौं, ११ चैत । तस्करहरुले कतिसम्म मौका छोप्छन् भन्ने कुरा हालै केरुङ नाकामा भएका गतिविधिले प्रष्ट हुन्छ । केरुङका प्रमुख भन्सार अधिकृत केदार पनेरु बुबा बितेर बिदामा बसेका बेलामा समेत तस्करहरुले मौका छोप्ने प्रयास गरेका छन् । तर, पनेरुले उक्त कुरा थाहा पाएपछि अहिले केरुङमा सेटिङमा भित्रन लागेका करिब ५ सय कन्टेनर अलपत्र परेका छन् । तस्करी गर्न लागेका व्यापारीहरुमा पनि हलचल मच्चिएको छ । … विस्तृत समाचार
​मन्दिरको नाममा घुस असुल्दै डिएसपी
काठमाडौं, ११ चैत । प्रहरीका घुस असुल्ने अनेक तरिका हुन्छन् । पछिल्लो समय प्रहरीमाथि निगरानी बढेपछि उनीहरु सिधैं घुस माग्दैनन् । विभिन्न बहाना बनाएर उनीहरु घुस माग्न थालेका छन् छन् । कोहीले गाडि बिग्रिएको नाममा तथा केहीले कार्यालय भवन मर्मतका नाममा घुस माग्ने गरेका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका डिएसपी रामेश्वर यादबको भने घुस असुल्ने तरिका अलि फरक छ । उनले कार्यालय परिसरमा… विस्तृत समाचार
काठमाडौैं, ११ चैत । नेपाक(एमाले)ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मापदण्ड र कार्य्विधि बनाएको छ । बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरूमा पार्टीका तर्फबाट छनोट गरिने उम्मेदवारहरूका लागि सातबुँदे मापदण्ड र तीनबुँदे कार्यविधि बनाएको हो । एमालेले स्थानीय तहमा पार्टीलाई बहुमतसहित पहिलो स्थानमा पु¥याउन तालमेलको नीतिसमेत लिने भएको छ । स्थायी समिति बैठकले केन्द्रको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलसँग… विस्तृत समाचार
‘संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल–चीन सम्बन्धमा कोशेढुंगा’
काठमाडौं, ११ चैत । नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका चीनका रक्षामन्त्री जनरल चाङ वाङ्गुवानले नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री चाङ तीन दिने भ्रमणका लागि १९ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनले बिहीबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका नेपाली समकक्षी बालकृष्ण खाँणसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस क्रममा… विस्तृत समाचार
काठमाडौं, ११ चैत । सर्लाहीबाट नेकपा (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक सांसद दुलारी देवीको बी एन्ड बी अस्पताल, ललितपुरमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ । उनको पार्थिव–शरीर आज बिहान ८ देखि १० बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा राखिने एमाले सचिव एवं केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । यही चैत ३ गते भारतको सीतामढीमा गाडी दुर्घटनामा परेकी सांसद देवीलाई भोलिपल्ट सो अस्पतालमा ल्याई उपचारमा राखिएको… विस्तृत समाचार